Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland » Switzerland na-emepe ókèala ya maka ndị njem njem nlegharị anya Gulf
A na-atụ anya ihe siri ike site na mba ndị na-emekọ ihe ọnụ na Council Council Council nke nwere ọdọ mmiri doro anya, ịma mma mara mma, ikuku dị ọcha na omume ndị dị n'èzí na-adọta ndị ọbịa.
Ọchịchị ọhụrụ na-enye ndị GCC ohere, ndị ọgwụ mgbochi EMA na WHO kwadoro ya, ịbanye Switzerland na-enweghị nyocha PCR na-aga njem ma ọ bụ kwarantaini mgbe ha batara.
Ndị njem nleta Gulf na-ahụ maka ihe dịka otu nde abalị na-ehi ụra kwa afọ na Switzerland tupu ọrịa na-efe efe.
Ndị ọrụ njem njem na Canton (steeti) nke Graubunden, nke a makwaara dị ka Grisons, na Switzerland na-akwado maka oge ezumike oge ọchịchị gọọmentị Switzerland na-akwadebe imepe ala ya na 26 June ndị ọbịa si Council Council Council (GCC) mba ndị agbatala ọgwụ mgbochi zuru oke.
Ọchịchị ọhụrụ ahụ, nke akwadoro na Wenesde 23 June, na-enye ndị bi na GCC ohere ka ha gbaa ọgwụ na European Medical Agency (EMA) na WHO kwadoro ịgba ọgwụ mgbochi, dị ka Pfizer ma ọ bụ Sinopharm (ihe ruru ọnwa iri na abụọ mgbe ịgba ọgwụ mgbochi). Switzerland na-enweghị ihe ọ bụla na-aga njem PCR ule ma ọ bụ kwarantaini na mbata.
“Switzerland na mpaghara Graubunden na-abụkarị ebe ezumike kachasị amasị ndị njem maka Gulf na site na imeghe ókèala, anyị na-atụ anya ịnabata ha ọzọ n'oge ọkọchị a.
"N'afọ a karịsịa, ikuku ọhụrụ, ịma mma sitere n'okike, ihu igwe dị nwayọọ na omume dị n'èzí dị ka njem, ịgba ígwè, na njem ụgbọ mmiri na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka nchụso ezinụlọ," ka Tamara Loeffel, Isi nke Development Business, Gaa na Graubunden.
Dabere na isi mmalite ndị ọchịchị, n'afọ ndị buuru ọrịa a agha, ndị njem njem Gulf na-akpata ihe ruru otu nde abalị n'abalị na Switzerland, na-emefu kwa ụbọchị ihe dị ka US $ 466 kwa ụbọchị.
Ọtụtụ n'ime ndị ọbịa GCC bụ ndị njem nleta na-atụrụ ndụ, na-agagharịkarị n'oge ọnwa ọkọchị. Ndị bi na UAE na Saudi Arabia bụ ndị buru ibu (70%) nke ndị njem nleta na Switzerland site na GCC, na Kuwait na Qatar na-atụle ihe karịrị 10% na nguzozi na-abịa site na Bahrain na Oman.